Peroa " Journey-Assist - Fampahalalana mahasoa. Climate. Miantsena. Sandam-bola
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Atsimo » Peru
Peru. Fampahalalana ankapobeny
Fantaro an'i Peroa
Firenena manana tsiro hafakely sy tantara manan-karena i Peroa. Ny fividianana fitsidihana an'i Peroa dia hanome anao fialan-tsasatra tsy hay hadino voahodidin'ny tsangambato tantara sy kolontsaina taloha, ary koa natiora mahavariana.
Ny fitsangatsanganana mahaliana indrindra ho an'ny mpizahatany dia atao eto. Ireo izay tonga voalohany tao Peroa dia asaina hitsidika, ohatra, i Machu Picchu - tanàna taloha iray very tany an-tendrombohitra ary saika nahy. Zava-mahaliana maro no voatahiry ao, ohatra:
ny boky Inca taloha sy ny rafitra 200 hafa.
Inona no tokony hatao any Peru
Any Peru, ny tsirairay dia afaka mahita asa mety. Ireo mpankafy ny fahagola dia ho liana amin'ny afovoan'i Lima renivohitra Peroviana, izay misy ny tranobe taloha amin'ny vanim-potoana fanjanahantany. Afaka mifandray amin'ny tantara ao amin'ny Cuzco ihany koa ianao. Ho hitanao ny fanamboarana rindrina fotsy tsara tarehy any Arequipa. Ny mpahay siansa dia liana amin'ny andalana ao an-tany efitra Nazca, izay tsy hita maso amin'ny maso miharihary fotsiny avy amin'ny fijerin'ny vorona.
Ho an'ireo izay liana amin'ny zavamaniry sy biby any ivelany, fitsangatsanganana any amin'ny iray amin'ireo hadilanana lalina indrindra eran'izao tontolo izao - mety i Kolka. Ireo mpiremby volom-borona lehibe indrindra - condor - mihodina eo amboniny. Tena mahaliana koa ny Farihy Titicaca, izay misy ireo nosy mitsinkafona ao Uros, sy ireo nosy Ballestos, izay onenan'ireo biby an-dranomasina sy vorona maro. Mazava ho azy fa mendrika ny hijerena ilay Amazon rakotra ala. Ao amin'ity ala ity dia afaka mihaona amin'ireo shaman ianao izay hanao fombafomba manokana ho anao ary maminavina ny ho avinao miaraka amin'ny fanampiany. Ary ireo tia natiora izay tia fijanonana ahazoana aina kokoa dia afaka mitsangantsangana manamorona ny Reniranon'i Amazon.
Toetr'andro any Peroa
Any amin'ny faritra andrefan'i Peroa dia misy toetr'andro tropikaly an'efitra manjaka, any amin'ny faritra atsinanana dia misy zara-tany. Raha ny amin'ireo faritra be tendrombohitra, ny haavon'ny toetrandro dia faritana amin'ny haavony.
Manakaiky ny morontsiraka andrefan'i Peroa dia misy onja mangatsiaka mihetsika izay antsoina hoe ony peroviana. Noho izany dia manjaka ny toetrandro maina any amin'ny faritra amorontsirak'ilay firenena. Amin'ny ankapobeny, ny lemaka amoron-tsiraka dia ny fitohizan'ny tany efitr'i Atacama. Mandritra ny taona dia 10-50 mm ny rotsakorana eto. Ny vanim-potoana maina sy mafana indrindra dia manomboka amin'ny Desambra ary mifarana amin'ny volana aprily. Mandritra ireo volana ireo dia indraindray tsy misy tanteraka ny rotsakorana. Tamin'ny volana febroary, mandritra ny andro, ny mari-pana eo anelanelan'ny +26 amin'ny faritra atsimo ka hatramin'ny +36 any avaratra. Amin'ny alina dia milatsaka hatramin'ny +20 any amin'ny faritra atsimo ary hatramin'ny 24 any avaratra. Amin'ny ririnina (izay manomboka amin'ny volana Jona ary mifarana amin'ny volana Aogositra) mandritra ny andro ny mari-pana any atsimo dia +19, any avaratra +28, ary amin'ny alina dia +13 any atsimo ary +17 any avaratra.
Any atsinanana kokoa any amin'ny faritra be tendrombohitra, mihena ny mari-pana eo ho eo. Amin'ny haavon'ny 4 m, na amin'ny fahavaratra aza, dia misy fanala amin'ny alina. Ny isotherm amin'ny antoandro amin'ny fahavaratra any amin'ireo tanàn-dehibe izay misy ao amin'ny Sierra dia manomboka amin'ny +000 ka hatramin'ny 19, ary amin'ny alina - manomboka amin'ny +21 ka hatramin'ny +4. Manomboka amin'ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra amin'ny antoandro, ny isotherms dia + 6 ... + 16, amin'ny alina - + 18 ... + 2. Any Andes, ny rotsak'orana dia manomboka amin'ny 6 mm amin'ny lemaka andrefana ka hatramin'ny 700 mm amin'ny lemaka atsinanana mandritra ny taona. Manomboka eto ny volana maina amin'ny volana aprily ary mifarana amin'ny volana oktobra.
Ao amin'ny selva, ny hafanana avo ary manjaka ny hafanana. Amin'ny fahavaratra, + isotherm ny andro, ary ny alina isotherm +34. Amin'ny ririnina, ny andro isotherm dia +24, ary ny isotherm amin'ny alina dia +30. Ao amin'ny faritra avana ala-dranomasina, 20 mm eo ho eo isan-taona no mianjera. Ny orana eto dia manomboka ny volana novambra ary mifarana ny volana martsa.
Inona no atahoranao any Peroa? fiarovana
Peru dia azo antsoina hoe firenena somary milamina ary azo antoka. Matetika ny mponina ao an-toerana no manoro hevitra ny mpizahatany mba hanara-maso tsara ny fananany ary mitondra fakantsary horonantsary eo ambonin'izy ireo fa tsy mitafy amin'ny sorony iray. Tsy dia mitranga matetika ny halatra, fa mbola mila mandinika an'ity loza ity ianao, raha tsy izany dia afaka miditra amin'ny toe-javatra tsy mahafinaritra ianao.
Mitaky fijanonana ao renivohitr'i Peru, Lima, ny fiambenana farany. Tsara kokoa raha tsy mampiasa taxi-tsotra fotsiny, esory ny firavaka lafo vidy alohan'ny dia an-tongotra ary aza miditra any amin'ny faritra mampidi-doza. Any amin'ny tanàna rehetra ianao dia afaka mahita ireo mpiasa ao amin'ny hotely na avy amin'ny mpamily fiarakaretsaka izay faritra mampidi-doza indrindra amin'ny alina. Aza manakaiky foana ny fiandohan'ny antontan-taratasinao. Tsara kokoa ny hamela azy ireo amin'ny trano fandraisam-bahiny iray azo antoka ary alao sary miaraka aminao. Tsy voalaza ny hanovana ny vola amin'ireo mpanakalo vola an-dalambe tsy ara-dalàna.
PEN. Sira. Fifanakalozana fifanakalozana any Peru. Bank sy ATM.
Ny vola nasionalin'i Peroa dia ny sira Peroviana (an-tsoratra amin'ny litera - PEN amin'ny dika iraisam-pirenena, ary ao anatin'ny firenena - S /). Ny sira 1 dia mizara zato centimos. Androany, amin'ny fivezivezena dia misy taratasim-bola ao amin'ny antokom-pinoana 100, 10, 20, 50 ary 100 solom-pinoana 200, 5, 10 ary 20 centimos, ary koa 50, 1 ary 2 sol.
Miaraka amin'izany, saika na aiza na aiza ao Però, ekena amerikana dia ekena ny fandoavana. Saingy ny volavolan-dalàna tranainy (lehibe kokoa noho ny 2004) tany amin'ny toerana maro dia tsy ekena ny fandoavana sy ny fifanakalozana.
Ny ankamaroan'ny banky dia misokatra ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 17 hariva, ny asabotsy manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 13. Fa any amin'ny faritany, sampana banky maro no miasa amin'ny fandaharam-potoan'ny tsirairay.
Ny fifanakalozam-bola dia azo atao any amin'ny birao fifanakalozana irery (antsoina hoe "casas de cambio"), banky, hotely ary fivarotana sasany. Ny dolara amerikana dia ekena hatraiza hatraiza, fa ny vola hafa kosa dia takalo amin'ny banky lehibe ao amin'ny renivohitra Peroviana ihany. Ny vola taratasy tranainy, malemy ary simba matetika dia mandà tsy ekena ho takalo. Zava-dehibe ny fitazonana ny tapakila fifanakalozana - rehefa mandao an'i Peroa ianao dia azonao ampiasaina hanakalozana ireo sira tsy ampiasaina amin'ny dolara amerikana.
Rehefa mifanakalo vola, mila mangataka volavolan-dalàna kely kokoa ianao. Rehefa dinihina tokoa, matetika eny an-tsena, ny tsena ary ny toeram-pisakafoanana voan'ny katolika dia mandà tsy hanaiky takelaka lehibe na manome fiovana avy amin'izy ireo, satria nilaza ny tsy fisian'izany.
Any an-drenivohitra sy amin'ireo tanàn-dehibe maro be dia be ny isan'ireo ATM izay manisy sira sira sy dolara amerikana rehefa manala karatra. Miaraka amin'ny carte de crédit dia afaka mandoa vola amidy ianao na amin'ny serivisy manokana any Lima sy any amin'ny faritra be mpizahatany malaza. Amin'ity tranga ity dia matetika ny komity manana andraikitra lehibe.
Ny dolara sy ny vola hafa any Peru
ny fifanakalozana farany tsy manam-bola
Fiantsenana any Peru. Inona no hividy?
Peru dia tsy mety amin'ny tranom-barotra lehibe misy dia feno, fa eto ianao dia afaka mahita vokatra mahaliana maro noforonin'ireo mpanao asa tanana. Nandritra ny an'arivony taona, ny teratany dia nanome voninahitra ny fahaizany tamin'ny fanaovana zavatra amin'ny volon'ondraky ny biby eo an-toerana toy ny llama, vicuna ary alpaca. Ny akanjo vita amin'ny volon'ondry alpaca dia mafana sy malefaka. Ny volony dia asehon'ny satroka, scarves, ponchos, fonon-tanana, sweaters. Manao kilalao ho an'ny ankizy ihany koa izy ireo amin'ity volon'ondry ity. Ny volom-borona albaka tanora (hatramin'ny 10 taona) dia tena sarobidy. Ireo tompom-pahefana dia manavaka ny volony voajanahary 22 amin'ny volon'ondry toy izany.
Ao amin'ny fivarotana souvenir dia misy ny chess tany am-boalohany sy mahafinaritra amin'ny endrika indianina sy mpandresy. Ny saribakoly mahaliana amin'ny akanjo vita amin'ny foko, dia amidy sy amidy any Cuzco. Azonao atao ihany koa ny mahita fivarotana kapila miaraka amin'ny mozika Peroviana.
Souvenir any Peroa
Ny souvenir tena mahaliana indrindra dia amidy amin'ny bazary. Manokana, ao an-tanànan'i Cusco dia misy ny tsenan'i San Pedro, izay ahitanao ny zava-drehetra, manomboka amin'ny sakafo hafakely ka hatramin'ny akanjo vita amin'ny volon'ondry mitovy alpaca. Afaka misakafo tsara koa ianao eto. Any Lima, ao amin'ny faritra Miraflores, misy tsena mahaliana iray hafa - Inca. Izy io dia miavaka amin'ny fahadiovany, ny fikarakarana azy tsara sy ny filaminany. Fanomezana fahatsiarovana maro sy asa-tanana no aroso eto. Ny tsenan Gamarra any Lima dia manokana amin'ny lamba. Ao no ahitanao akanjo lafo vidy sy fitafiana nasionaly. Iray amin'ireo bazaar Peroviana mahaliana indrindra ny Modelo ao an-tanànan'i Chiclayo. Mizara ho fizarana iray izy io ary ny iray amin'izany dia fantatra amin'ny anarana hoe "tsenan'ny mpamosavy". Manolotra taolana trozona, amulets, hoditra bibilava ary koa cacti hallucinogenika.
Amin'ireo foibe fivarotana ao Peroa, ny lehibe indrindra dia any Lima ary antsoina hoe Larcomar. Trano tsy manam-paharoa izy io, izay mifanaraka tsara amin'ny tontolo manodidina. Ity ivon-toeram-pivarotana ity dia mipetraka amin'ny vatolampy. Indraindray dia toa tsy miraika na dia avy amin'ny manakaiky be aza. Any Larkomar, marobe ny fivarotana marika.
Ny afovoan-tsena lehibe indrindra any Peru dia antsoina hoe Real Plaza ary misolo tena azy any Lima, Huancayo, Trujillo ary amin'ny tanàna 10 hafa farafahakeliny. Amin'ireto tranombarotra ireto dia misy kianja fivarotan-tsakafo, hypermarkets, sinema ary toeram-pilalaovana. Misy toeram-pivarotana lehibe iray any Lima antsoina hoe La Rambla. Any Cuzco, ankoatry ny Real Plaza izay efa voalaza, dia eo ihany koa ny Komersial Imperial Plaza ary toeram-pivarotana maromaro.
Any amin'ny basy sy amin'ny tsenam-barotra kely dia azo atao ny manao fividianana, fa any Peru kosa dia tsy dia raitra firy. Fihenam-bidy azo tsapain-tanana (mihoatra ny 15%) dia tsy azo tanterahina.
Jewels any Peru
Any Però, vita ny volamena, volafotsy ary varahina avo lenta. Maro karazana ny firavaka ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy. Ny malaza indrindra dia vokatra volafotsy, izay matetika dia manahaka ny firavaka nentim-paharazana ao amin'ny Incas fahiny. Ny hatsaran-tarehy lehibe indrindra dia miavaka amin'ny fehin-tenda modely lehibe. Amin'ny ankapobeny, malaza i Peroa noho ny volafotsy mora vidy. Angamba ny firavaka tsara tarehy sy tany am-boalohany dia vita tamin'io vy io miaraka amin'ny impregnations enamel.
Ny fivarotana firavaka firavaka malaza indrindra any Peroa dia antsoina hoe Ilaria ary hita ao Lima. Saingy maro ireo magazay any Indianina izay manolotra firavaka miavaka. Ny vidin'ny volafotsy any Peroa dia manomboka amin'ny sira 30 isaky ny peratra, avy amin'ny sira 60 isaky ny kavina ary avy amin'ny masira 130 isaky ny vava.
Ny endrika governemanta dia repoblika iray.
Vola - Sol Peroviana (PEN)
Fivavahana - Kristianisma katolika
State fiteny - Espaniola
Renivohitra - Lima